MAXAA HOR-TAAGAN SUUQEYNTA ARI-SOOMAALIGA ?
Dubai,13th June 2001
Tan iyo markii Dawladda Imaaraadku ka qaaday xayiraadda soo dhoofinta xoolaha Soomaaliyeed ee nool saddex todobaad ka hor, waxaa maalin kasta ku soo kordhaya Suuqyada xoolaha ee magaalooyinka Dubai,Sharjah iyo Abu Dhabi ari-soomaaliga oo inta badan lagu keeno doonyo, in yaroo kalena gaadiidka cirka ee dayaaradaha ay keenaan garoonka Sharjah .
Inkastoo dhadhanka xoolaheena uu yahay mid ay si fiican u yaqaanaan dadweynaha ku nool dalkan, oo ay si xoogleh uga door bidayaan marka la barbar dhigo xoolaha laga keeno meelo badan oo adduunka ah, hadana waxaad moodaa in ganacsatadeenu laga badiyo xirfadda suuqeynta (marketing) xoolaha, gaar ahaana marka laga eego mudada yar ee xayiradda la qaaday iyo sida xad-dhaafka ah ee sayladaha looga soo buuxiyay xoolaha,taasna ay dhalisay in sicirka arigeena uu si aad ah hoos ugu dhaco .
Asbaabaha ugu waaweyn ee dhalinaya dhibaatooyinka noocan ah waa iyadoo aanay jirin cid u ogaata Soomaalida baahida suuqa iyo dheelitirkiisa (Demand & Supply) , in ganacsatada ay si is-dabajoog ah oo haba-yaraatee aaney ku jirin wax isla-socodsiin ah ay uga keenayaan xoolaha meela kala duwan oo dalka Soomaaliya ah, kadibna uu suuqa ku dhaco , iyagoon inta badan u diyaarin xoolaha hooy, baad,biyo iyo dawo, halkaasna uu khasaare xoog leh ka soo gaaro, sida ku dhacday dhawr ganacsade todobaadkan bartamihiisa markii ay uga bakhtiyeen dekedda Xamariya ee magaaladan Dubai ari ka badan 470 neef .
Arigaas bakhtiyay oo soo galay safar 5-7 maalmood oo dhanka badda ah,wuxuu soo gaaraa dekedaha Imaaraadka isagoo weyd ah oo aad u liita , wuxuuna u baahan yahay xanaano gaar ah , si uu u soo kabto . Laakiin nasiibdarro ganacsatada Soomaaliyeed inta badan ma awoodaan inay ijaartaan xeryahaas deden ee qorraxda iyo cimilda kulul ka hareeya ,baadka iyo biyahana ay ku helayaan .
Sidaas awgeed, waxaa khasab ku ah inay ku iibiyaan wixii loo garto oo aan inta badan kaafineyn kharashkii iyo masaariiftii ay hore u soo galeen, kadibna waxaa inta badan xoolaha kala wareega qolooyin qowraca ariga liita oo u qaybiya sayladaha, arigana ladanna dib u sii iibiya .
Hadii aan mustaqbalka dhow loo furin xoolaha Soomaaliyeed suuqa weyn ee Boqortooyada Sacuudiga,lana helin cid u habeysa ganacsatadeena suuqan Imaaraadka, waxaa hubaal ah in maalinba maalinta ka danbeysa uu suuqa ka jabayo, khasaare iyo magac-xumana u keenayo xoolaheena.